Jubbaland oo walaac ka muujisay baxsadka Wasiir Cabdirashiid Janan - WardheerNews
Jubbaland oo walaac ka muujisay baxsadka Wasiir Cabdirashiid Janan
Kismaayo (WDN)- Warsaxfadeed ka soo baxay Maamul Goboleedka Jubbaland, ayaa lagu sheegay in ay ka walaacsan yihiin xaaladda Wasirkii Amniga ee Jubbaland, oo bishii Oogost ee 2019, lagu xidhay Muqdisho.
Md. Cabdirashiid ayaa la sheegay in uu wakhtigaasi lagu xidhay Muqdisho, uu ka yimid magaalada Doolow, isaga oo u sii jeeday magaalada Addis Ababa, ee caasimadda Itoobiya.
Warar maanta ka soo baxay Gen. Sakiya Xuseen oo ah Taliye Xigeenka hoggaanka ciidanka Booliiska ee DFS, oo soo gaadhay WardheerNews, ayaa lagu sheegay in Md. Cabdirashiid uu ka baxsaday xabsigii uu ki jiray. Taliye Xigeenka ayaan faahfahin ka bixin qaabkii uu u baxsaday Md. Cabdirashiid.
Warsaxafadeedka ka soo baxay Jubbaland oo soo gaadhay WardheerNews, ayaa u qornaa sida hoos ku xusan: